dildo 041 (double head dildo ) – MM Online Shopping
dildo 041 (double head dildo )
color black , flesh
ထိပျခေါငျးလုံးပတျ 1.57 လကျမ ရှိပါတယျ .
ခေါငျး ၂ဖကျပါသောကွောငျ့ မိမိဘာသာတယောကျတညျးဖွဈစေ မိမိ အဖျောနဲ့တပွိုငျနကျတညျးဖွဈစေ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ .အစဈကဲ့သို့ သှေးကွောတှပေ့ါ ထညျ့ထားပေးတဲ့အတှကျ အစဈလို့မြိုး ခံစားရစပေါလိမျ့မယျ.
ခန်တာကိုယျအတှကျ safe ဖွဈစမေညျ့ ပစညျးမြားကိုသာ အသုံးပွုထားသောကွောငျ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမရှိပဲ စိတျခစြှာအသုံးပွုနိုငျပါတယျ .အသားကောငျးပွီး အလှယျတကူကှေးဆနျ့လို့ရသောကွောငျ့ သုံးစှဲသူ စိတျကွိုကျဖွဈစမှော အမှနျပါပဲဗြာ
တခုခငျြးစီရဲ့ အသုံးပွုပုံ video ကို ​အောကျ​ပါ link ​လေးမှ တဆငျ့​ဝငျ​​ရောကျ​ ကွညျ့​ရှုနိုငျ​ပါတယျ​
တခြို့ဖုနျးတှမှေ့ာ video က media error လို့ပျေါတတျပါတယျ ဒါပမေယျ အဲဒီ media errorကိုလကျနဲ့တခကျြ နှိပျကွညျ့ပေးပါ ဝငျကွညျ့လို့ရပါတယျ
ထိပ်ခေါင်းလုံးပတ် 1.57 လက်မ ရှိပါတယ် .
ခေါင်း ၂ဖက်ပါသောကြောင့် မိမိဘာသာတယောက်တည်းဖြစ်စေ မိမိ အဖော်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် .အစစ်ကဲ့သို့ သွေးကြောတွေ့ပါ ထည့်ထားပေးတဲ့အတွက် အစစ်လို့မျိုး ခံစားရစေပါလိမ့်မယ်.
ခန္တာကိုယ်အတွက် safe ဖြစ်စေမည့် ပစည်းများကိုသာ အသုံးပြုထားသောကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပဲ စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် .အသားကောင်းပြီး အလွယ်တကူကွေးဆန့်လို့ရသောကြောင့် သုံးစွဲသူ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါပဲဗျာ
တခုချင်းစီရဲ့ အသုံးပြုပုံ video ကို ​အောက်​ပါ link ​လေးမှ တဆင့်​ဝင်​​ရောက်​ ကြည့်​ရှုနိုင်​ပါတယ်​
တချို့ဖုန်းတွေ့မှာ video က media error လို့ပေါ်တတ်ပါတယ် ဒါပေမယ် အဲဒီ media errorကိုလက်နဲ့တချက် နှိပ်ကြည့်ပေးပါ ၀င်ကြည့်လို့ရပါတယ်
Categories: Dildo ကျားတုများ, Sex Toys
Be the first to review “dildo 041 (double head dildo )” Cancel reply
vibration wolf set
Ks80,000.00 Add to cart
Vibrator2way
Ks20,000.00 Add to cart